Isa girinihausi kumba uye shandisa zvakanyanya nguva yechando | Bezzia
Isa greenhouse kumba uye nyatso kushandisa nguva yechando
Maria vazquez | 13/09/2021 20:00 | Decoration
Ungade Iva nebindu diki? Kugona kurima chikafu chako kubva kumbeu? Ndichiri kunakidzwa nekurima gadheni muchando futi? Girinihausi pamba ndiyo mhinduro kuchengetedza zvirimwa zvako zvakapfava nemaruva kubva kuchitonhora kwakanyanya, mvura kana chando munguva yechando.
Zvino chando ichocho chave kuuya Isa greenhouse kumba! Izvo zvinokutendera iwe kuti uenderere kunakidzwa nekurima gadheni uye kurima gadheni panguva ino yegore, pamwe nekukupa iwe yekuzorora nzvimbo. Bheja pane dzimwe dzinokwezva uye dzakasimba shanduro dzakadai segirazi magirazi ekuchengetera kana kugadzira yako pachako greenhouse ine zvakachipa zvinhu.
1 Zvakanakira kuve negreenhouse pamba
2 Mhando dzegreenhouse
2.3 Mudiki muhukuru
Zvakanakira kuve negreenhouse pamba
Kune zvakawanda zvakanakira kuisa greenhouse kumba, asi iyo inotonhora ndiyo nzvimbo yatinogara. Ngatiitei sramba uchishanda mubindu redu kana nemiti yedu munguva yechando, kudzivirira izvi kubva pachando. Icho chingangove chiri chikuru mukana asi kwete chete.
Icho chinoyevedza uye chekushongedza chinhu. Chinhu chinogona kuita kuti gadheni redu riwedzere kukwezva.
Iyo inzvimbo yakanaka mairi chengetedza michero yakaoma kwazvo munguva yechando kuti urambe uchinakidzwa navo kunze muchirimo.
Inobatsira kwazvo kana tichirima miriwo yedu panguva inotonhora yegore. Iyo inotibvumidza isu kuwedzera kuwedzera uye inovimbisa kubudirira kwekucheka uye mbesa.
Inotipa isu nzvimbo yeku kukura mhando kubva kunodziya mamiriro ekunze uye tropical
Inogona zvakare kuve nzvimbo yakakwana yekuve kunze kubva mumba pane tembiricha yakanaka munguva dzinotonhora dzegore. Iwe unongoda chete kuisa diki tafura yepadivi uye cheya pairi.
Iko kushanda kwegreenhouse ndiko gadzira inodzorwa nharaunda (microclimate) iyo inochengetedza yakakwana mamiriro ekupisa, hunyoro uye mwenje kuitira kuti zvirimwa nemaruva zvikure zvine hutano uye zvichidzivirirwa kubva kune yakaipa mamiriro ekunze. Nekudaro, hadzisi dzose dzimba dzekuchengetera pamusika dzinozadzisa basa iri nenzira imwechete, saka zvakakosha kuti uzvibvunze mibvunzo mishoma usati watangisa kutenga imwe.
Chii chauri kuzoshandisa greenhouse? Uyu ndiwo mubvunzo wekutanga waunofanirwa kuzvibvunza kana wafunga kuisa greenhouse mubindu. Hadzisi dzimba dzese dzekudyara dzinopa mamiriro anonakidza ekuti ishandiswe senzvimbo yekuzorora. Haasi ese akagadzirwa nezvinhu zvakafanana, izvo zvinokanganisa zvese kunaka kwayo uye, chokwadika, bhajeti rinodiwa kuti uwane imwe.
Kune marudzi asingaverengeke e greenhouse, zvinoenderana nezvinhu, saizi, dhizaini ... Nhasi chinangwa chedu ndechekukuratidza mabrugwa madiki emamwe acho, anonyanya kufarirwa, kuitira kuti zvirinani iwe uve wakajeka pekutangira kutarisa.
Magirazi ekuchengetera egirazi ane hunyanzvi hwekuchengetera uye ipa yakanakisa kuputira. Iwo zvakare ndiwo anodhura. Girazi rinopa kuvhenekera kwakakodzera kwekukura kwezvirimwa uye maonero akachena zvakakwana kubva mukati nekunze uye zvinopesana.
Ivo ndivo akanakisa sarudzo kune vanonyanya kuda gadheni, asi zvakare iyo inonyanya kukodzera kugadzira nzvimbo dzekunze dzekuzorora. Kana zvasvika pakugadzira yakafukidzwa yekuwedzera imba iri mubindu, ivo ndivo vanonyanya kudiwa. Dzakasimba kwazvo ivo sarudzo inosimudzira zvakanyanya kupfuura iya yakagadzirwa nezvinhu zvepurasitiki.
Kune akasiyana akasiyana magadzirirwo pakati pezvivakwa zvine magirazi epurasitiki. Plate zvinhu senge polycarbonate kana polymethacrylate, ivo vanopa maturusi ane solidity isingagone kuwanikwa nefirimu kana firimu zvinhu zvakadai se polyethylene (PE) kana polyvinyl chloride (PVC).
Izvo hazvinakidze segirazi izvo kunyangwe, izvo zvakagadzirwa nemaplate hazvisi kure kwazvo neizvi uye zvakachipa. Uye zvakare, izvo zvinhu izvo zviri nyore kushanda nazvo, saka kuve unobatsira zvishoma iwe pachako unogona kuvaka greenhouse yako pachako uchishandisa huni uye polycarbonate mahwendefa. Pawebhu, iwe unowana zvakare zvese kubva kuzvirongwa zvekudzidzisa kuti uzive kuzviita.
Zvese mune chimwe chinhu uye mune vamwe zvinokwanisika kuwana, mukuwedzera, zvidyarwa zvidiki kufanana neaya anoratidzwa mumifananidzo. Kana iwe uchingoda chete nzvimbo yekuchengetedza zvirimwa zvako munguva yechando, kuti ugone kugadzira kabhedhi kadiki kana kurima miriwo mishoma, iyi ndiyo mhinduro kwayo. Ini pachangu, ini ndinoda sarudzo dzakabatanidzwa neiyo facade, iwe?
Tsvaga imwe nzvimbo yakanaka yegreenhouse, Pasina mimvuri mikuru yemiti kana zvivakwa zvekuti inogamuchira isingasvike maawa matanhatu ezuva pazuva, chiyera nzvimbo zvakanaka uye isa greenhouse pamba- Iwe unowana zvakawanda kubva mairi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Isa greenhouse kumba uye nyatso kushandisa nguva yechando
Ndezvipi zvikonzero zvekusatendeseka kwepamoyo
Kazhinji, ane majee neshangu